Inkqubo yokuhamba kokutya okomileyo kwenkukhu
Inkukhu yasekhaya eyomileyo yomkhenkce ifuna umatshini wokomisa ingqele xa uyenza. Umzekelo, ikati yenkukhu yoma ngumkhenkce. Ngaphambi kokwenza inkukhu, lungiselela inkukhu kwaye uyinqumle ibe ngamaqhekeza amancinci malunga ne-1CM, enobunzima obucekeceke, ukuze inqanaba lokomisa likhawuleze. Emva koko yibeke kwi-L4 yomile ...
Izinto eziluncedo zokutya inyama yenja yasekhaya
Umxholo wokufuma kwenyama eyomileyo ungaphantsi kwe-14%, eqinisekisa ukuba ubunzima bemveliso bunokuba nezakhamzimba ezingaphezulu. Kwangelo xesha, iyahlafuna kwaye iyahlafuna, ehambelana ngakumbi nendalo yezinja ziyathanda ukukrazula kunye nokuhlafuna i-2.
Izinja ezinale midlalo zibonisa "ukungondleki", ke nceda unike isondlo ngokukhawuleza!
ngomphathi ku 19-07-12
Kwinkqubo yokukhulisa inja, umniniyo kufuneka aziqwalasele ngakumbi iimpawu zenja, kwaye ukuyondla akukho mfuneko yokuba ube nesondlo esaneleyo. Xa inja ingondlekanga, kuya kuvela ezi zinto zilandelayo. Ukuba inja yakho inayo Ukuba kunjalo, yinike isondlo! 1. Inja ibhityile ...
Ukubaluleka kokuphathwa kwezilwanyana zasekhaya
ngomphathi ku 18-10-16
1. Ivumba lokuphatha liza kuvuselela umdla wezinja, ukuze izinja ezingakuthandiyo ukutya zinokutya kakhulu. 2. Kulunge kakhulu ukuqeqesha izinja ukuba zihambe. Ukutya amashwamshwam, baya kukhumbula ngokukhawuleza ezinye iintshukumo kunye nembeko, eziluncedo kakhulu kuqeqesho. 3. Isilwanyana sasekhaya ...
I-Korea ikuthintele ukungeniswa kwamaqanda neenkukhu zase-US
ngomphathi ku 17-03-06
ICandelo loMphathiswa Wezolimo, Ukutya kunye neMicimbi yasemaPhandleni liyakwalela ukungeniswa kwamantshontsho aphilayo (iinkukhu kunye namadada), iinkukhu (kubandakanya izilwanyana zasekhaya kunye neentaka zasendle), amaqanda eenkukhu, amaqanda atyiwayo kunye neenkukhu ezivela eMelika ukusukela nge-Matshi 6 ngenxa yokuqhambuka yomkhuhlane we-avian influenza we-H7 e-United S ...
I-FDA iphakamisa imithetho emitsha yokutya kwezilwanyana zasekhaya
ngomphathi ku 16-10-30
Ulawulo lokutya kunye neziyobisi （FDA prop iphakamisa imimiselo yamaziko asekhaya nawamanye amazwe afunekayo ukuba abhalise phantsi kweFederal Food, Drug, and Cosmetic Act - i-FD & C Act） ukuseka iimfuno zokwenza imveliso elungileyo ngoku, kulungiswa, p ...
Iindidi kunye nemisebenzi yezilwanyana zasekhaya
ngomphathi ku 15-06-06
Udidi lokuhlafuna: Inokuyisebenzisa ngokukuko ikhono lomhlathi wesilwanyana sakho, igaye amazinyo esilwanyana sakho, kwaye ithintele ukubala kwamazinyo. Iimveliso ezinjalo zinokuba ziithoyi zokuthintela izilwanyana ukuba zingalumi izinto ekhaya kuyo yonke indawo. Amaqebengwana okutya inyama: Amaqebengwana okutya amancinci kukutya okulula kwezilwanyana zasekhaya. Ideliciou ...
Ungakukhetha njani ukutya okulula kwezinja?
ngomphathi ku 14-07-12
Ukongeza ekondleni izinja ukutya okona kutya, sikhetha ukutya okulula kuzo. Ngapha koko, ukukhetha amashwamshwam kukukhathalela impilo. Sifanele sikukhethe njani ukutya kwezinja? 1. Imathiriyeli ekrwada xa ukhetha ukutya okulula kwezinja, sinokukhetha kwizinto zokwenza izinto. Ngokubanzi, ihlala ...
ngomphathi ku 13-05-09
Okokuqala, lawula inani lokutya izinja, inja yokutya ukutya okuninzi iya kuchaphazela ukutya kwenja. Isibini, asinakutshintshwa kukutya okulula Ke akufuneki ubeke endaweni yokutya amashwamshwam. Okwesithathu, musa ukuvumela inja ukuba iphuhlise ...
Ukwaziswa kokuphathwa kwesilwanyana esomileyo
ngomphathi ku 12-01-18
Itekhnoloji yokumisa okomkhenkce kukukhenkcisa inyama ekrwada eshushu ngokukhawuleza nge-40 degrees celcius emva koko uyomise kwaye uyomise. Le yinkqubo ebonakalayo. Le nkqubo ikhupha kuphela amanzi kwizithako, kwaye izondlo kwizithako zigcinwa ngcono. Umkhenkce owomileyo uhlala uhleli ...
ngomphathi ku 11-08-11
Izinja ezibawayo, ukongeza ekondliweni kwemihla ngemihla kokutya kweenja, umniniyo uya kondla iziqhamo ezongezelelekileyo, amashwamshwam, njl. Njl. Namhlanje iXiaobian ukwazisa kuwe, ilungele izinja ukuba zitye "amashwamshwam" ambalwa, izidlo ...